कर्णाली प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा एमाले शून्य !
सुर्खेत, ३ जेठ– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आज हुने एकता घोषणामा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा शून्य प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ । तर माओवादी केन्द्रबाट भने दुई जना जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत स्थायी समितिमा पर्ने निश्चित भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेले प्रदेशसभामा २० सीट जितेको छ । एमाले स्थायी कमिटीमा कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व भएको थिएन
एमालेबाट प्रदेश सहसंयोजक यामलाल कंडेल र प्रकाश ज्वालाले स्थायी समिति सदस्य बन्न खोजे पनि हुन सकेका थिएनन् ।
एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले कम्तिमा कर्णाली प्रदेशबाट १ जना स्थायी समितिमा लिनुपर्ने माग पार्टी समक्ष गरेको बताए । पार्टीले कर्णाली प्रदेशका एमाले नेताहरुको भावना बुझेर सोही अनुरुपको जिम्मेवारी दिनेमा आफू आशावादी भएको बताए ।
एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य यामलाल कंडेलले यसबारेमा आफू लाई जानकारी नभएको भन्दै थप जानकारीका लागि पार्टी उपाध्याक्ष तथा कर्णाली प्रदेश संयोजक युवराज ज्ञवालीसँग कुरा गर्न लोकान्तरलाई आग्रह गरे ।
यता, प्रदेश संयोजक ज्ञवालीले स्थायी कमिटीमा पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु मात्रै ल्याउने विधान रहेको बताए । उनले जिल्लाबाट यति वा यो प्रदेशबाट यति स्थायी समितिमा ल्याउने कुनै विधान नभएकोले वरिष्ठ नेताबाहेक अरु स्थायी समितिमा आउने सम्भावना कम भएको बताए । तर पनि एमाले कर्णाली प्रदेशले कम्तिमा १ जना स्थायी समितिमा ल्याउनुपर्ने माग नेतृत्वसँग गरेको र नेतृत्वले अहिलेसम्म केहि निर्णय नगरेको उनको भनाई छ ।
जताततै माओवादी हावी
एमालेबाट स्थायी कमिटीमा शून्य सहभागिता हुनेभएपछि अहिले माओवादीका नेताहरु नै प्रदेश इन्चार्ज हुने, मुख्यमन्त्री पनि माओवादीकै हुने हुँदा २० सीट जितेर पनि एमाले निरीह बन्ने देखिएको छ । ,संसदीय दलको नेता पनि माओवादी कै भागमा पर्ने हुँदा एमालेका संसदीय दलका नेताको भूमिका के होला ? नाम नबताउने शर्तमा एमालेका एक नेताले भने, यस्तै हो भने यो प्रदेशमा माओवादी हावी हुने पक्का छ ।
वडा कार्यालयमा चोरी एक जना पक्राउ
जीप दुर्घटनामा यात्रु बेपत्ता भएकोप्रति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त
अवैध समानसहित तीन जना पक्राउ
गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा विशाल प्रदर्शन [फोटोफिचर]
गुठी विधेयक फिर्तामा कांग्रेसले उठायो प्रश्न– संसद चलिरहेको समयमा बाहिर फिर्ता लिन मिल्छ ? काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारी शैलीको आलोचना गरेको छ । संसद चलेको समयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमै फिर्ता लिनुपर्नेमा बाहिर गएर फिर्ता ...
जापानमा भूकम्प आउँदा २६ जना घाइते, सुनामी चेतावनी हटाइयो
इन्डोनेसियामा डुंगा पल्टिँदा १७ जनाको मृत्यु